08/02/12 ~ Myanmar Forward
ထုတ်ဝေခွင့် ယာ ယီ ရပ် ဆိုင်း ခဲ့သော လျှပ် တစ်ပြက် ဂျာနယ်ကို ပြန်လည် ထုတ်ဝေခွင့်ပြု
Posted by drmyochit Thursday, August 02, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
” သြဂုတ်၊ ၂၀၁၂ ညနေပိုင်းတွင် စာပေ စိစစ် ရေးမှူး ဒုတိယ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးတို့မှ ၂လ ပိတ်ပင် တားမြစ် ရပ်ဆိုင်း ခဲ့သော လျှပ်တစ်ပြက် သတင်း ဂျာနယ်အား ၉၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၂ရက် နေ့တွင် ပြန်လည် ထုတ်ဝေခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြား ခဲ့သည်။ သည့်အတွက် လျှပ်တစ်ပြက် သတင်း ဂျာနယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီခဲ့ ကြသူများ၊ ၀ိုင်းဝန်း ခဲ့ကြသူများ၊ စောင့်ရှောက်ခဲ့ ကြသူများ၊ ဖေးမပေးခဲ့ ကြသူများ၊ ရပ်တည် ပေးခဲ့ကြသူများ၊ အားပေးခဲ့ကြသူများ အားလုံး အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင် ဂါရ၀ ပြုပါကြောင်း မှတ်တမ်း တင်အပ်ပါသည်”ဟု ဦးမြတ်ခိုင်က ၎င်း၏ facebook စာမျက် နှာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်အတွဲ ၃ အမှတ် ၉၁ စာမျက်နှာ ၈ တွင် ဖော်ပြ ပါရှိသော မသီတာထွေး၏ ဓာတ်ပုံ နှင့်ပတ်သက်၍ အယ်ဒီ တာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်အား ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)(ဂ)တို့ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ကိုယ်စား ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးက တရားစွဲ ဆိုခဲ့ကာ တရားစွဲ ဆိုမှု နှင့်အတူ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခွင့် ကိုလည်း ယာယီ ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က နောက် ဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချိခွင့် ရရှိခဲ့သော လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်ကို ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခွင့် ယာယီ ပိတ်ပင်မှုမှာ တစ်လ ခန့် ကြာမြင့်မည်ဟု မူလက သိရှိ ရသော်လည်း တစ်လပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်း တွင်လည်း ထုတ်ဝေဖြန့် ချိခွင့်မှာ မရရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းခံ ခဲ့ရပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ် ခုနှစ်ပတ် အကြာ တွင်ပြန်လည် ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျာနယ်ပြန် လည်ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိ ခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တရားစွဲ ဆိုခဲ့သော အမှုကိုမူ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေ ရဆဲ ဖြစ်ကာ ထိုအမှု အတွက် ငါးကြိမ်မြောက် ကြားနာမှု ရုံးချိန်းကို သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့သို့ ချိန်းဆို ထားပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ ကလည်းပြန် ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင် ဌာနက The Voice Weekly ဂျာနယ်နှင့် Envoy News Journal တို့ အား သတ်မှတ် ထားသော စည်းကမ်း ချက်များကို ချိုးဖောက် သည်ဟုသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ထုတ်ဝေခွင့် ယာယီ ရပ်နား ခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ယာယီရပ် နားခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်း မီဒီယာသမား အများအပြား ပါဝင်သည့် ဆွေးနွေး ပွဲတစ်ရပ်ကို သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ကတော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက်ဆိုင်၌ လုပ်ခဲ့ကာ တက်ရောက်ခဲ့သော သတင်းသမား များစုစည်း၍ သတင်း လွတ်လပ် ခွင့်ကော်မတီ(ယာယီ)ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုကော်မတီမှ သတင်း မီဒီယာများ အပေါ် ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း၊ ချုပ်ချယ်ခြင်းများ လုပ်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာချက် တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါ ထုတ်ပြန် ချက်၌ အချက် (၇)ချက် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုအချက်များမှာ-
(၁) ပိတ်ပင်ခံ ထားရသော The Voice Weekly ဂျာနယ်နှင့် Envoy ဂျာနယ်၊ လျှပ်တစ်ပြက် တို့ကို ချက်ချင်း ထုတ်ဝေခွင့်ပေးရန် ( မှတ်ချက်။ လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်ကို သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း စာပေစိစစ်ရေးမှ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက အကြောင်းကြားခဲ့)
(၂)ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများကို ထိခိုက်စေ သည့်နောက်ပြန် ဆွဲသော မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့် လုပ်ရပ်မျိုး ကိုမဆို အရေးယူ ဖယ်ရှားပေးရန်
(၃) ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေနှင့် မီဒီယာ များကို ဖိနှိပ် ကန့်သတ် ထားသော ဥပဒေများကို ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းပေးရန်
(၄) သတင်း မီဒီယာ များအပေါ် အရေးယူ မှုများကို ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ခြင်း မပြုရန်
(၅) ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ရေးသားဖော် ထုတ်သော မည်သည့်ရေးသား မှုများကို အစိုးရက ဥပဒေကြောင်း အရ တရားစွဲ မှုများကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းရန်
(၆) မီဒီယာ သမားများ သဘော ဆန္ဒ မပါဝင်ဘဲရေး ဆွဲထားသည့် မည်သည့် မီဒီယာ ဥပဒေ ကိုမဆို လက်မခံပါ။
(၇) လက်တလောဖြစ် ပွားနေသော စာပေ လွတ်လပ်ခွင့် ဆုံးရှုံးမှုများ အတွက် မီဒီယာ များအား နိုင်ငံတော်၏ တာဝန် အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်က အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံဖြေရှင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများတွင် အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်းကိုးဦး ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့
From :7day
အသိုင်းအ၀ိုင်းအချို့က ဘာသာရေးပြဿနာ အဖြစ် နိုင် ငံရေးနှင့် နိုင်ငံ တကာ ကိစ္စရပ် အသွင် ဖြစ်ပေါ်စေရန်ကြိုးပမ်းမှုကို မြန်မာ နိုင်ငံက လုံးဝပယ်ချ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရက တရားဝင် သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ရာ ပဋိပက္ခများ ၌ အိုင်အင်န်ဂျီအိုသုံးခုမှ ၀န်ထမ်းကိုးဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့ကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သော နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း(INGO) သုံးခုမှ ၀န်ထမ်း ၁၀ ဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရာ တစ်ဦးမှာ အပြစ်မရှိသည့်အတွက် ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဖမ်း ဆီး ၍ ရုံး တင်တရားစွဲခံနေရသောဝန်ထမ်းကိုးဦးမှာ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့နှစ်ခု ဖြစ်သော UNHCR မှ ငါးဦး၊ WFP မှ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး AZG မှလည်း သုံးဦးပါဝင်သည်။
၎င်းတို့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွား နေစဉ် နေအိမ်မီးရှို့မှုများ၊ လှုံ့ဆော်သော လက်ကမ်းစာရွက်များ ဖြန့် ဝေခြင်းစသည့် ဥပဒေပ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ INGO ၀န်ထမ်းများက အဖွဲ့အ စည်းအ ဓိကတာဝန်ကို မဆောင်ရွက်ဘဲ ၎င်းတို့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ ခြင်းကို ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများ၊ သက်သေများ အခိုင်အ မာရှိကြောင်းလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။ ၎င်းတို့အား တရားစွဲဆိုရာတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ သက်သေငှားရမ်းခွင့်လည်း ပြုထားပြီး၊ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ အပြစ်မရှိ၍ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သူတစ်ဦးမှာ AZG မှ ၀န်ထမ်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယသမ္မတ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဥာဏ်ထွန်းအား အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားဟု လွှတ်တော်တွင်းသတင်းများထွက်ပေါ်
From : messenger
ဒုတိယသမ္မတ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဥာဏ်ထွန်းအား အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားဟု လွှတ်တော်တွင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီး ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယသမ္မတ စီစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဌေးဦးက " ကျွန်တော့အနေနဲ့က သိလည်း ပြောခွင့်မရှိပါဘူး ဦးခင်အောင်မြင့်က ပြောခွင့်ရှိပါတယ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာက သိပ်မကြာခင်မှာ ဒုတိယသမ္မကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းနိုင်မှာပါ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကျော်ပြောလို့မကောင်းပါဘူး ၊ သေချာတာက ဒုတိယသမ္မတ အမည် စာရင်း ကျွန်တော်တို့ စီစစ်ရေးကော်မတီကိုမရောက်လာသေးပါဘူး " ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်မောင်ရည် ကလည်း“ကျွန်တော်တို့သိသလောက်တော့ ဒုသမ္မ တစာ ရင်းက ပြောင်းသွားပြီးလောက်ပြီ အခုပြောနေတာတွေကတော့ နောက်တစ်ပတ် တနလာင်္နေ့မှာ အဖြေတစ်ခုသိရမယ်လို့တော့ ကြား ပါ တယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဥာဏ်ထွန်း သည် လက်ရှိတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)တွင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန် ယူထားသူဖြစ်သည်.။
ကျန်းမာရေးအခြေနေ စိုးရိမ်ရသဖြင့် ဒေါ်စု လွှတ်တော် ခွင့်ယူ
Posted by drmyochit Thursday, August 02, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
အခြေအနေ တော်တော်ဆိုးတာကြောင့် အနီးအနား ပြုစုရန် အခြား လွှတ်တော် အမတ် နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း နှင့် ဦးအုန်းကြိုင် တို့ ပါ ခွင့်ယူလိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတွင်း ဥရောပ ခရီးစဉ်မှာလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေစဉ် အော့အန်လာတာကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ရပ်လိုက်ရပြီး အားလုံးကို လိုက်တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အသက် ၆၈ နှစ်ထဲ ဝင်လာပြီ ဖြစ်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အပြင် အခြား အမျိုးသမီးရောဂါများ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရကို အတုယူကြရန် အမေရိကန် ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ် အခြား အထီးကျန် အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အတုယူသင့်ပြီး ဒီအတွက် နိုင် ငံတကာဘက်ကလည်း တုံ့ပြန်မှုကောင်းတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး Michael A.Hammer က ပြောလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိ်ုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ်မှာ တချက်ခြင်း တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီး ကတိပြုခဲ့အတိုင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဟာ မြန်မာအပေါ် အရေးယူမှုအချို့ကို လျှော့ပေါ့ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရဘက်က အခု ပြုလုပ်လာတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးခြေလှမ်းတွေဟာ အစ ဆိုပေမဲ့ အားရကျေနပ် စရာရှိတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန လက်ထောက် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး Michael A.Hammer က ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတာ၊ ပွင့်လင်းလာတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြည့် ရတာတော့ အတော်လေး အားရကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက မျှော်လင့် နေတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေတဲ့ပုံပါ။ ဒါတွေဟာ အစပျိုးမှုသာ ဖြစ်နေပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အခု ခြေလှမ်းတွေဟာ အားရကျေနပ်စရာရှိပါတယ်။”
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၈၅ သန်းပေးမည်
Posted by drmyochit Thursday, August 02, 2012, under သတင်းများ | No comments
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၈၇ နောက်ပိုင်းချေးငွေအသစ်ထုတ်ပေးမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သောကြောင့် ယခုထောက်ပံ့ငွေမှာ နှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါထောက်ပံ့ကြေးကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး အထူး သဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများ၏ အခြေခံအဆောက်အဦးများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေး ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးများကို လာမည့် ၂၀၁၃ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးဆပ်ရမည့်အကြွေးမှာ အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ခန့်ရှိပြီး ယခုအခါ ယင်းအကြွေးကိစ္စသည် သဘောတူညီမှု ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး သူတိုင်း စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီနှင့် အောက်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် လိုင်စင်ရမည်
ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုန်ပြန်ချက်များ အရ အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး သူများဟာ စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီနဲ့ အောက်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် လိုင်စင်များ ရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက်မှု ကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးရှိ က.ည.န ရုံးများမှာ ဆောင်ရွက် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီနဲ့ အောက်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် ရယူလို သူများဟာ သတ်မှတ် ယာဉ်မောင်း သင်တန်းများ တက်ရောက်ကာ အမောင်းသင် လိုင်စင် ရယူပြီး စစ်ဆေးမှုများ ဖြေဆိုအောင်မြင် ပါက ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် အတွက် လိုင်စင်ထုတ် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်သူများ အတွက် ထုတ်ပေး သွားမယ့် ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် လိုင်စင် တွေဟာ အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်တဲ့ အခါ မှာတော့ စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီအထက် ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့် လိုင်စင်နဲ့ လဲလှယ်ခွင့် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရင်က ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရရှိဖို့ အတွက် စတင် သင်ကြား မောင်းနှင်ဖို့ ကနဦး ရယူရတဲ့ အမောင်းသင် လိုင်စင်ကို အသက် ၁၇ နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ထုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ ဆိုင်ကယ်ကို မြို့ပြနဲ့ ကျေးရွာ အနှံ့အပြားမှာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြု လာတာကြောင့် အခုလို ဆောင်ရွက် ပေးရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တချို့ဒေသများ မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဟာ ဆိုင်ကယ်ကို ကျောင်းတက်၊ ကျောင်းဆင်း အဓိက ဆောင်ရွက် နေရတာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဟာ အသက် ၁၇ နှစ်မပြည့်သေး သူများ ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် မရှိပဲ မောင်းနှင် သွားလာနေခြင်း များကို စိစစ်တွေ့ရှိ ရတဲ့အတွက် အခုလို ဆောင်ရွက် ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက်မှု ကိုတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံများရဲ့ ကန့်သတ်ချက် များကို ကိုးကားပြီး အခုလို အမောင်းသင် လိုင်စင် လျှောက်ထားခွင့်နဲ့ ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့်ကို လျှော့ပေါ့ သတ်မှတ် လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
"တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သား ဖမ်းဆီးရေး စတင် မဲဆောက်၌ ၆ဝ ဦးကျော် အဖမ်းခံရ"
တရားမဝင် မြန်မာအလုပ် သမားများ ဖမ်းဆီးသည့် စစ်ဆင်ရေးကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်တွင် စတင် လိုက်သည်။
မဲဆောက်မြို့ပြင်ရှိ မဲ့ကဆာ ရွာအမှတ် ၂၆၁ ရပ်ကွက် ၁ဝတွင် တည်ရှိသည့် စိုင်းမွန်းအမှတ်တံဆိပ် ဖိနပ်စက်ရုံကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မဲဆောက်အာဏာပိုင် များက ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ် ဆေးခဲ့ပြီး တရားမဝင်အလုပ်လုပ် ကိုင်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၆၈ ဦးကို ထိုင်းရဲက ဖမ်းဆီး လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှောင်တခင်ဖမ်းဆီးမှုတွင် အဖမ်းခံရသည့် မြန်မာများကို မြန်မာနိုင်ငံ မြဝတီဘက်သို့ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်ကို ဥပဒေအရ အရေးယူမှုများ ဆောင် ရွက်သွားမည်ဟု ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိတစ်ဦးက သတင်း ထောက်များကို ပြောသည်။
အဖမ်းခံရသူများကို မဲဆောက် ရှိ ထိုင်းလဝကအချုပ်တွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး အမျိုးသမီး ၄၈ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၂ဝ ဦးဖြစ်ကာ ၄င်းတို့ အမှုအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေး မည့် အဖွဲ့အစည်းများ မရှိသေးဟု အလုပ်သမား များက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးမှုသတင်း ကြောင့် မဲဆောက်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံများက ၄င်းတို့၏ အလုပ်သမား များကို ခေတ္တတိမ်းရှောင်မှုများ ပြု လုပ်စေပြီး အချို့စက်ရုံများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရပ်နားထားသည်ဟု မြန်မာအလုပ် သမားအရေး ဆောင် ရွက်နေကြသည့် အဖွဲ့များက ပြောသည်။
ဝါဆိုလပြည့်နေ့တွင် ဘုရားဖူး၊ သိလစောင့် အနားယူသူ များပြား သော်လည်း အခါအားလျှော်စွာ စုတောင်းပွဲ လုပ်ခဲ့သူများ နဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် မေတ္တာပို့ခဲ့သူများ မတွေ့ရ
Posted by drmyochit Thursday, August 02, 2012, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် အဆင့်မြင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတ
(နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁)
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် အဆင့်မြင့် ချစ်ကြည် ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲ ဦးစီးချုပ် နှင့် အိန္ဒိယ ရေတပ် ဦးစီးချုပ် Admiral Nirmal Verma (PVSM, AVSM, ADC) ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ အိန္ဒိယ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ ယနေ့ နေ့လယ် ပိုင်းတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော် အထူး လေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာ ကြရာ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်မာမာဝေ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်အေးမြင့်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်း နှင့်ဇနီး ဒေါ်ထွေးထွေးညွန့်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီး များနှင့် နေပြည်တော် တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတို့က နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြသည်။
(တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် အဆင့်မြင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ထွက်ခွာရာ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြစဉ်။)
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် အဆင့်မြင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ ဇနီး ဒေါ်ကြူ ကြူလှနှင့် ကာ ကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ အရာရှိကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ စစ် သံမှူး Colonel Rajesh Kumar တို့ လိုက်ပါ သွားကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဧရာဝတီ၏ ပရိသတ်တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်ခြင်း (သို့) လိမ်လည်မှုတစ်ခုအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
ကျနော် အင်တာနက်သတင်းတွေကို အမြဲတမ်း ဖတ်ရှုတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီ၊ မဇ္ဈိမ၊ DVB တို့ရဲ့ ပရိသတ်ဆိုရင်တော့ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ သတင်းတွေက တိကျမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အားပေးခဲ့ပါတယ်။ သတင်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အလွန်ကို အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းကတော့ " ပေါင်းလောင်းဆည် ဖောက်ချမှုကြောင့် ကျေးရွာတစ်ချို့ ရေကြီး" ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ပျဉ်းမနားသား တစ်ယောက်ပါ။ အခြေ အနေ တစ်ရပ်ကြောင့်သာ အခြားမြို့မှာ နေနေတာ။ ပျဉ်းမနား အကြောင်းအကုန်သိပြီး ဆွေမျိုးတွေလည်း အများကြီးပါ။ တစ်နေ့ ပျဉ်းမနားမှာ ရေကြီးတဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တော့ မြ၀တီ facebook မှာရေကြီးတဲ့ ပုံတွေ၊ စစ်တပ်နဲ့ ကြက်ခြေနီက ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေတဲ့ပုံတွေကို တွေ့လိုက် ရတယ်။
နောက်တော့ဧရာဝတီကနေ" ပေါင်းလောင်းဆည် ဖောက်ချမှုကြောင့် ကျေးရွာတစ်ချို့ ရေကြီး" ဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဓာတ်ပုံကိုကျတော့ မြ၀တီ facebook က ယူတယ်ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ တွေ့ရတယ်။ ပျက်ဆီးမှုစာရင်းတွေက မြ၀တီ facebook ကယူထားတာ၊ ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်း ပါပါတယ်။ မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးအရာရှိတစ်ဦးလို့ ပြောထားတယ်။ အတိအကျလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပါတဲ့ စာသားတွေ အားလုံးကလည်း ရေကြီးသမျှ သတင်းစာက သတင်းတွေကို စုထားတာပါ။
ဒါနဲ့ ကျနော် ပျဉ်းမနားကို ဖုန်းဆက်ကြည့်ပါတယ်။ ရေကြီးတာက မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းလောင်း ဆည် ဖောက်ချလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါင်းလောင်းဆည်က သတ်မှတ်တဲ့ ရေအမှတ် မရောက်လို့တောင် အခက်တွေ့နေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော် အယုံကြည်ဆုံး သတင်းဌာနက သတင်းတွေကို ဘယ်လို ယုံရမလဲဆိုသာ စဉ်းစားသွားရပါပြီ။ စိတ်လည်း မကောင်းပါဘူး။ အခုလိုမျိုး သတင်းတွေလိုလည်း မလုပ်သင့် ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုမျိုး သတင်းတွေကို တင်တာလို့ မေးစရာဖြစ်လာပါပြီ။ သေချာ သိချင်ရင် www.facebook.com/mwdmedia မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ ခရီးစဉ် တွင် သားကြီးအရင်းခေါက်ခေါက် မြင့်ဆန်းအောင်က လုံးဝ လာမတွေ့ခဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ ခရီးစဉ်တုန်းက ရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့် ကြာသော်လည်း သားကြီး ဖြစ်သူ အလက်စန္ဒား အဲရစ် က လုံးဝ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
လူအများစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ချစ်လွန်းလို့ သား တွေနဲ့ ခွဲပြီးနေတယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် အလက်စန္ဒားအဲရစ်ကတော့ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို တွေ့ချင်စိတ်ကုန်ခန်းနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ က အမျိုးသား ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မြေး လို့ ပြောရမှာ တွန့်တိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မိုက်ကယ်အဲရစ်တို့ ရဲ့ သားအငယ် ကမ်အဲရစ် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် လာရောက်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခဲ့ပေမယ့် အလက်စန္ဒားအဲရစ်ကတော့ လုံးဝ လာရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ကမ်အဲရစ် ရဲ့ မိသားစု နေထိုင်ရာ လန်ဒန်မြို့မှာ ၅ ရက်ကြာ ရောက်နေတဲ့ အချိန်တုန်းကလည်း အလက်စန္ဒားအဲရစ်က လုံးဝ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံသား မိုက်ကယ်အဲရစ်ရဲ့မျိုးဆက်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိန်းရန်အတွက် အာရှနိုင်ငံအများအပြား ရှိနေတဲ့အထဲကပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ခရီးအရင်ထွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာစကား မပြောတတ်တဲ့ ချွေးမ၊ မြေးများ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အခု တခါ စက်တင်ဘာလအတွင်း မှာတော့ သားအကြီး ဖြစ်သူ ရဲ့ မိသားစုများကို သွားတွေ့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလက်စန္ဒားအဲရစ် ဟာ မထင်မရှား နေထိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယောင်္ကျား မိုက်ကယ်အဲရစ်ကဲ့သို့ပင် ဂွေးစေ့ကင်ဆာရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မိုက်ကယ်အဲရစ် နှင့် ကမ်င်အဲရစ် တို့ဟာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်လှသော မြန်မာ့ အမျိုးသား ဖခင်ကြီးရဲ့ မြေးအရင်းများ ဖြစ်ကြပေမယ့် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ လူအားလုံးက ၎င်း တို့ နှစ်ယောက်ကို မသိကြပေ။
အမျိုးသားဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဟာ ရှေးကတည်းက ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မျိုးမစောင့်မှုကြောင့် ယခုဆိုလျှင် မြန်မာတွင်သာ မက ကမ္ဘာတွင် ပါ မထင်မရှား ပျောက်ကွယ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့များ ညအချိန်မှာ ၀င်ရောက်ပြီးလူသစ်စု
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းလောက်အထိ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေတို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွား လျက်ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၁၂၁) နဲ့ တပ်ရင်း(၂၇)မှ တန်ဂွန်းနဲ့ လော်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ ကေအိုင်အေ(၃၀)ဦးခန့်ဟာ ကေအိုင်အေ နယ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အဖွဲ့ငယ်တွေဖွဲ့စည်းကာ လောင်လွင်ကျေးရွာ၊ မိုင်းနောင်၊ နမ့်လင်းပါရွာတွေမှာ ညအချိန် တိတ်တဆိတ် ၀င်ရောက်လူသစ်စုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါလူသစ်စုဆောင်းမှုကြောင့် ကျေးရွာနေ တောင်ယာလုပ်ကိုင်သူ ယောင်္ကျားလေး(၉)ဦးနဲ့ မိန်းကလေး(၂)ဦးတို့ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကေအိုင်အေ(ကချင်တပ်ဖွဲ့)များအနေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနဲ့ဝေးကွာတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ညအချိန်ဝင်ရောက်လူသစ်စုခြင်း၊ ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်လူဟောင်းတွေကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အင်အား ဖြည့်တင်းလာတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
“အခုလို ညအချိန်မှာ ၀င်ရောက်ပြီးလူသစ်စုလို့ ကျေးရွာမှာနေတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေ ရွာထဲမှာမအိပ်ရဲ တော့လို့ တောင်ယာတဲတွေမှာ သွားအိပ်ရတယ်။ တစ်ချို့ဆို ဒီမှာတောင် မနေတော့ဘူး၊ မြို့ပေါ်မှာ သွားရှောင်နေ ကြတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ကောင်းစားရေးဆိုပြီး ကချင်လူမျိုးတွေကို ဒုက္ခပေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ အလုပ်ပျက်၊ အကိုင်ပျက်နဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေလည်း အဆင်မပြေကြဘူး။ အဖမ်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ မိဘတွေဆို တော်တော်လေး စိတ်ပူနေကြရတယ်။ ရင်တမမနဲ့ပဲ သူတို့ကလေးတွေ ပြန်လာတာကို စောင့်နေကြ ရတယ်လို့ လောင်လွင်ကျေးရွာခံ ဒေါ်မရစ်ဂျာဆိုင်းမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
OIC ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ ဆွေးနွေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်များကြား အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဆော်ဒီအာရေး
ဗီးယားနိုင်ငံ မက္ကာမြို့ မှာ သြဂုတ်လအတွင်း ကျင်းပမဲ့ OIC ခေါ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
မှာ ဆွေးနွေး သွားမယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီ နာတာလီဂါဝါက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနေနဲ့ လူမျိုးရေးကိုဖြစ်စေ၊ ဘာသာရေးကိုဖြစ်စေ တခြားဘာအကြောင်းကိုပဲ ဖြစ်စေ အခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်
လို့လည်း မိမိတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ တစ်သဘောတည်းရှိကြောင်း သူက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို အထူး သံကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်လို့စုံစမ်းလေ့လာခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဟာ ဒီကိစ္စနဲ့
ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံချင်း အနေနဲ့လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ
အများနဲ့ သော်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတာ မဟုတ်ပါကြောင်း စသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက
ပြောဆိုတယ်လို့ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့စွဲနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထုတ် The Jakarta Post သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘာသာခြားတွေကို တော့ ရစရာ မရှိအောင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် နှိပ်ကွပ်ထား၊ လူမျိုးတုန်းသတ်
မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ ဖြစ်ချင်တာတွေ စိတ်ကူးယဉ်နေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
လက်တွေ့ မွတ်ဆလင်တွေ islamization လုပ်နေတာ ဘယ်လောက်ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ေ
နသလဲ၊ဘယ်ဘာသာတွေကို ရစရာမရှိအောင် နာလန်မထူနိုင်အောင် ဖျက်ဆီးပြီးပြီလဲ
မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်နိုင်ငံတွေကို islamized လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဘယ်နိုင်ငံတွေကို islamize လုပ်ဖို့ ကျန်နေသေးသလဲကျန်နေသေးတဲ့ မြန်မာ၊ ထိုင်း အပါအ၀င် ဘယ်နိုင်ငံတွေကို မွတ်ဆလင်တွေ
ဘယ်လိုပရိယာယ်တွေနဲ့ဘယ်လို ခေါင်းစဉ်တွေ အောက်မှာ မွတ်ဆလင်တွေ အလုံးအရင်းလိုက် သွင်းနေပြီး
ဗလီတွေ ဘယ်လောက်တောင်ဆောက်နေကြသလဲ၊တခြားမကြည့်ပါနဲ့အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလန်၊ အိန္ဒိယ ၄ နိုင်ငံမှာ ဆောက်ထားတဲ့ဗလီအရေအတွက်ကို ပဲတွက်ကြည့်လိုက်ပါ။
မွတ်ဆလင်များ ဗလီတွေ ထောင်နဲ့ချီဆောက်ပြီး အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ရှိနေခြင်း
Why are we so afriad of Demographic Jihad ?
( 1:20 Muslims' inbreeding program)
Because it is Animals' Method.
လက်နက်နဲ့ ဗြောင်စစ်တိုက်တာ မဟုတ်တဲ့ ကုရ်အာန်အစ္စလမ်အယူဝါဒစစ်ပွဲ၊ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပြီး အယုတ်တမာနည်းလမ်း Demographic Jihad ဗလီဆောက်၊မွတ်ဆလင်လူဖေါက်စစ်ပွဲတွေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အားလုံး တဖြည်းဖြည်း တအိအိနဲ့ရင်ဆိ်ုင်နေကြရတာပါ ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဗလီစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးလောက် ဆောက်ပြီးပြီလဲ သိချင်ပါသည်။
စစ်တွေတွင် မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀%
သံတွဲတွင် မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၆၀%
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောတွင် မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၉၅% ဖြစ်နေပါပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းမှာ ဗလီရာချီဆောက်ထားသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
သီအိုရီအရကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ စေတီပုထိုးစုစုပေါင်းအရေအတွက်ထက်ဗလီအရေအတွက်က နှစ်ဆကျော်ပိုများနေရင် islamize ဒုတိယအဆင့် step-2islamization ဖြစ်နေပါပြီ။
အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းမင်းတရား၊ ဆင်ဖြူရှင်၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ အားလုံး သွေးနဲ့ ရင်းပြီး ဖြစ်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် မွတ်ဆလင်များ ဗလီတွေထောင်နဲ့ချီဆောက်ပြီး အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
မြန်မာအားလုံးတို့ ဒီနေ့ ဒီအချိန် ဒီလိုနိုင်ငံအကျယ်အ၀န်း နဲ့နေနိုင်ခြင်းမှာ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းမင်းတရား၊ဆင်ဖြူရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ အားလုံး သွေးနဲ့ရင်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ နဲ့တင်ပြီးသွားမည် မဟုတ်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာသည် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ဗျူဟာများစွာထဲမှ ဗျူဟာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်မျိုးနဲ့ မရရင် နောက်တစ်မျိုး အကွက်ဆင်လာကြပါအုန်းမယ်။
မြန်မာတွေ အားလုံး အစဉ်အမြဲ သတိရှိကြပါ။
သီပေါမင်းအရိုးအိုး ပြန်သယ်ရန်လွတ်တော် တင်ပြ
Posted by drmyochit Thursday, August 02, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ,ဆောင်းပါး | No comments
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အဖွဲ့ထောင်ထားသော မြေမြှုပ်မိုင်းအား အပြစ်မဲ့ရွာသားတစ်ဦးနင်းမိသေဆုံး
ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီခန့်က တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပါတက်ကျေးရွာအနီး ၀မ်ဟွေလုံကျေးရွာမှ ရွာသား တစ်ဦးဟာ SSA ၀မ်ဟိုင်းအဖွဲ့လို့လူသိများသော သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အဖွဲ့မှထောင်ထားတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းအား နင်းမိပြီးနေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားကြောင်း အဆိုပါရွာသားများထံမှ သိရှိရပါတယ်။
မိုင်းနင်းသေဆုံးခဲ့သော ရွာသားအမည်မှာ ပေါ်အောင်ဆိုသူ ပလောင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဇနီးနှင့် လူမမယ်အရွယ်ကလေးငယ် ၄ ယောက်ကျန်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒေသခံ တောင်သူ တွေရဲ့ ပြောစကားအရ ပေါ်အောင်ဟာ ၀မ်ဟွေလုံမှ ၎င်းရဲ့တောင်ယာသို့အသွားလူသွားလမ်းပေါ် မှာပဲ SSPP/SSA အဖွဲ့မှထောင်ထားသော မြေမြှုပ်မိုင်းတစ်လုံးကိုနင်းမိ၍သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
SSPP/SSA အဖွဲ့အနေနဲ့ ဇွန်လအတွင်း တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်မှာ ကျေးရွာများနှင့် တောင်ယာ သွားသည့် လူသွားလမ်းတစ်လျောက် မြေမြှုပ်မိုင်းများအများအပြားထောင်ထားတဲ့ အတွက် ရွာသားများ၊ ကျွဲ၊ နွားများ မကြာခဏ မိုင်းနင်းသေဆုံးမှုများရှိနေပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိမိုင်းအလုံး(၃၀) ကျော်လောက် နေ့တိုင်းနီးပါးပေါက်ကွဲသံကြားနေရတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် အနီး ၀န်းကျင်ရွာသားများမှ ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိပြီး တောင်ယာနှင့်ရွာအချင်းချင်းသို့ပင် မသွားရဲတော့ကြောင်းနှင့် SSPP/ SSA အဖွဲ့ကိုလည်း မြေမြှုပ်မိုင်းများပြန်လည်ရှင်းလင်းပေးဘို့တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန် မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း(၁)
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကိုရဲရင့်သစ္စာရဲ့ နောက်ဆုံးပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကျွန်တော်ရှေ့မှာ ပြန်ကြားခဲ့တဲ့ ပြန်ကြားချက်တွေထဲက နားလည်မှုလွဲမှားတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောကြားပါရစေ။ ကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြသွားတာတွေကို ပညာရှင်ပီသတယ်လို့ ကိုရဲရင့်သစ္စာ ချီးမွှမ်းသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ဟာ ကိုရဲရင့်သစ္စာလိုမျိုး ကျမ်းတစ်စောင်၊ စာတမ်းတစ်ခုတလေမှ မပြုစုဖူးသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် မခံယူဝံ့ပါဘူး။ ကိုရဲရင့်သစ္စာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေ့လာဆည်းပူးဆဲ လူတစ်ယောက်အဖြစ် နှိမ့်ချပြောဆိုသွားတာ တွေ့ရတော့ တကယ်ပဲ ရင်ထဲက လှိုက်လှဲစွာ လေးစားမိပါတယ်။ ကိုရဲရင့်သစ္စာလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်ဟာ လေ့လာဆည်းပူးဆဲ လူတစ်ယောက်တောင် မဟုတ်ပဲ လေ့လာဆည်းပူးခါစ လူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပညာရှင်အသိုင်းအ၀န်းရဲ့ အပြင်က သာမန်လူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်သားဖူးတဲ့ ဗဟုသုတအနည်းအကျဉ်းနဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကိုရဲရင့်သစ္စာလိုမျိုး သမိုင်းတွေကို အသံမြည်အောင် ရေးသားဖို့ ကျွန်တော့်မှာ အခက်အခဲ၊ အကန့်အသတ်တွေရှိနေတာကို ၀န်ခံလိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ မအားလပ်လို့ ရတဲ့အားလပ်ချိန်လေးအတွင်းမှာ အလျင်စလို ပြန်ကြားရတာကို နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးစေချင်ပါတယ်။
ခုကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဘင်္ဂလီ(ရိုဟင်ဂျာ)ကိစ္စမှာ ကိုရဲရင့်သစ္စာပြောသွားသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး သဘောတူညီမှု မရနိုင်သေးတဲ့အချက်က ဒီဘင်္ဂလီတွေ ရခိုင်မှာ အခြေချနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အရင်ပြန်ကြားခဲ့တဲ့ စာတွေထဲက ရေးသားချက်တွေဟာ တင်ပြပုံအားနည်းလို့ ကိုရဲရင့်သစ္စာနားလည်မှုလွဲတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်ကြားချက်-၂ မှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ စာတစ်ကြောင်းကို ကိုရဲရင့်သစ္စာ မျက်စိလျှမ်းသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာက-
ခုကျွန်တော်ပြောသွားသမျှအချက်တွေဟာ မြောက်ဦးခေတ်မှာ ရခိုင်ပြည်မှာ အခြေချခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလီ၊ အာရပ်၊ ပထန်၊ မဂိုနဲ့ ပေါ်တူဂီစတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ဦးခေတ်မှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မူဆလင်ဦးရေဟာ ရခိုင်ဦးရေနဲ့ယှဉ်ရင် အရမ်းနည်းပါးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ဟာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကလွဲရင် ကျန်တဲ့လူနေမှုပုံစံ၊ စိတ်နေသဘောထား စရိုက်သဘာဝတွေဟာ ရခိုင်လူနေမှုစနစ်မှာ စိမ့်ဝင်ရောနှောသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီစာအရ ကျွန်တော်ဟာ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ အရင်ကတည်းက လုံးဝအခြေချနေထိုင်ခဲ့ခြင်း လုံးဝမရှိပါဘူးလို့ ယတိပြတ်ငြင်းပယ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အလုံးအရင်းပြောင်းရွေ့အခြေချမှု ပုံစံကိုအဓိကထား ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ကတော့ ဘင်္ဂလီတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြောင်းရွေ့အခြေချမှုဟာ အချိန်ကာလအားဖြင့် သုံးကြိမ်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက မြောက်ဦးခေတ်မှာ စစ်သုံးပန့်(သို့) ကျွန်အရောင်းအ၀ယ်အနေနဲ့ ရောက်ရှိလာတာပါ။ နောက်တစ်ခုက ကိုလိုနီခေတ်မှာ ကူလီအနေနဲ့ ၀င်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေအထားအရ ဘင်္ဂလားကနေ ရခိုင်ပြည်ထဲက အလုံးအရင်း ပြောင်းရွေ့အခြေချဖို့ဆိုတာ အဲဒီခေတ် အုပ်ချုပ်သူဘုရင် ဒါမှမဟုတ် အာဏာပိုင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကိုလိုနီခေတ်လယ်မှာလည်း ရခိုင်ဒေသမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ မြေလွတ်မြေရိုင်း ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းတွေအတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရ အစီအစဉ်နဲ့ အလုံးအရင်းပြောင်းရွေ့လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကတော့ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ဗြိတိသျှတွေ မြန်မာပြည်ကို အိန္ဒိယကနေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ခိုးဝင်လာတယ်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့် ပြောင်းရွေ့အခြေချလာသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆရာတွေ ပြောနေသလို ဒီဒေသရဲ့ ဌာနေမျိုးနွယ်စု မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရဲရင့်သစ္စာရဲ့ ပြန်ကြားချက်ထဲမှာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ နာမည်ပေးထားကြောင်း အမှန်အတိုင်း ဖော်ပြသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် နားလည်မှုကပ်လွဲနေတဲ့ အချက်က ကျွန်တော်က ခုနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာ ပြောင်းရွေ့ဝင်လာရောက်လာသူတွေနဲ့ ပါလီမန်ခေတ်မှာ ခိုးဝင်အခြေချလာသူလို့ဆိုထားပြီး ကိုရဲရင့်သစ္စာက ရှေးဘုရင်ခေတ်ကတည်းက အလုံးအရင်းနဲ့ ပြောင်းရွေ့အခြေချလာသူတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘင်္ဂလီတွေထဲမှာ အများစုပါဝင်နေတယ်လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုထားတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုး တိုက်ရိုက်ရေးသားထားတာမျိုး မတွေ့ရပေမယ့် ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ ဒီလိုပဲနားလည်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကိုရဲရင့်သစ္စာ ကိုးကားတင်ပြထားတဲ့ ဒေါက်တာ Suniti Bushan Qanungo ပြုစုခဲ့တဲ့ A History of Chittagong Volume (1), စာမျက်နှာ ၂၉၁ မှာ-
“ရခိုင်မှာ ရှိတဲ့ မွတ်စလင် လူဦးရေ ကို အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် အုပ်စု လေးခုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ က တော့ ဘင်္ဂါလီ၊ အခြားအိန္ဒိယအနွယ်၊ အာဖရိက အာရှ အနွယ် နဲ့ native ဌာနေ မွတ်စလင် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ မွတ်စလင်အုပ်စုလေးခု ထဲမှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေက အကြီးဆုံးအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားအောက်ဖက် ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ မွတ်စလင် သုံ့ပန်းတွေဟာ ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံမှာ ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင် အရေအတွက်တိုးပွါးခြင်း ကို များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။”
ဒီတင်ပြချက်အရ ဘင်္ဂလီတွေဟာ နဂိုကတည်းက ဒါမှမဟုတ် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံအဆက်ဆက်မှာ ပြောင်းရွေ့အခြေချလာသူတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီအရေအတွက်ဟာ စစ်သုံးပန့်တွေကြောင့် ပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့တယ်လို့ ကိုရဲရင့်သစ္စာ လက်ခံထားကြောင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုရဲရင့်သစ္စာပြောထားတဲ့ Settlement တွေမရှိပဲ ကိုလိုနီခေတ်မှသာ ဘင်္ဂလီတွေအလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာတယ်ဆိုတာ Logically အရပဲဖြစ်ဖြစ် Historically အရပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်ဟာလည်း ဒီသုံးသပ်ချက်ကို ပိုပြီး ခိုင်မာစေပါတယ်။ အဲဒီကိုးကားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြောက်ဦးခေတ် ရခိုင်ပြည်ထဲကို ဘင်္ဂလီတွေ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ၀င်ရောက်လာတယ်၊ အဲဒီဘင်္ဂလီတွေဟာ ခုချိန်မှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်။
သမိုင်းပညာရှင် ဦးခင်မောင်စော-ဘာလင်ရဲ့ လန်ဒန်မှာဖတ်ကြားခဲ့တဲ့ Religions Of Arakan ဆိုတဲ့စာတမ်းမှာ မြောက်ဦးခေတ် မင်းဗာဘုရင်လက်ထက် သက္ကရာဇ်၁၅၃၃ခုနှစ်မှာ စစ်တကောင်းကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ရာကနေ ဖမ်းဆီးမိတဲ့ ဘင်္ဂလီစစ်သုံးပန့်တွေကို သံတွဲမြို့ကို ဘုရားကျွန်အဖြစ် ခေါ်ယူလာတဲ့ အကြောင်း တင်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာတမ်းရေးသားသူက Tydd,W.D,Burma Gazetteer,Sandoway District, Vol.A,Rangoon,1962 ကို ကိုးကားထားပါတယ်။ အခု သံတွဲခရိုင်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ဆံတော်၊အံတော်၊နံတော် စေတီတော်တွေဟာ အဲဒီဘင်္ဂလီဘုရားကျွန်တွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘုရားကျွန်ဆိုကတည်းက သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ တရားဝင်နိုင်ငံသား မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ၁၅၆၄ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ သံတွဲမြို့စားရဲ့ မြောက်ဦးထီးနန်းကို ပုန်ကန်ထကြွမှုမှာ အဲဒီဘုရားကျွန် ဘင်္ဂလီတွေဟာ ပုန်ကန်သူဖက်က ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီအရေးအခင်း အရေးနိမ့်သွားတဲ့အခါ မင်းပြစ်မင်းဒဏ်ကို ကြောက်ရွံ့ပြီး ဘုရားကျွန်လေးထောင်လောက်ဟာ အထက်မြန်မာပြည် အင်းဝဘုရင်ဆီကို ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဘင်္ဂလီတွေကို အင်းဝဘုရင်က ကောင်းမွန်စွာလက်ခံပြီးတော့ သူတို့ကို ဘုရားကျွန်အဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ကြောင်း ကြေငြာပြီး မြေဒူးဆိုတဲ့အရပ်မှာ နေရာချထားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမူဆလင်တွေကို မြေဒူးမူဆလင်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီး လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အခြေချနေထိုင်နေကြတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ မြေဒူးမူဆလင်တွေ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီမြေဒူးမူဆလင်တွေဟာ မြန်မာဘုရင်အဆက်ဆက်ဆီမှာ သစ္စာရှိစွာ အမှုထမ်းခဲ့တယ်လို့ အဲဒီစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီမြေဒူးမူဆလင်တွေဟာ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း၁၅၀လောက် အခြေချခဲ့ပြီး အချို့ဟာ ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းရဲ့ ရခိုင်ကျူးကျော်စစ်ပွဲကာလမှာ သံတွဲစစ်မျက်နှာကနေ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဗမာပြည်မကိုမပြန်တော့ပဲ သံတွဲမှာပဲ ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခုသံတွဲမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မြေဒူးမူဆလင်တွေဟာ ခုရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေလို ဘင်္ဂလီစကား၊ရခိုင်စကားမပြောပဲ အညာသံဗမာစကားကို ပြောကြတယ်လို့ စာတမ်းမှာဆိုထားပါတယ်။ ဒီဘင်္ဂလီအနွယ် မြေဒူးမူဆလင်တွေဟာ မြန်မာလူနေမှုစရိုက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရောနှောစိမ့်ဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက် ဘာသာကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုကလွဲရင် မြန်မာစကားကိုပဲ ပြောဆိုပြီး ကျန်တဲ့လူနေမှုစရိုက်တွေ အကုန်လုံးနီးပါးဟာ မြန်မာတွေနဲ့ ထပ်တူညီကြပါတယ်။ ကမန်မူဆလင်တွေလိုပဲ သူတို့ဟာ သူတို့နေထိုင်ရာ ဒေသတွင်းက မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတစ်စုံတရာ မဖြစ်ပဲ၁၉၃၈ခုနှစ် ကုလား-ဗမာအဓိကရုဏ်းမတိုင်ခင်ထိ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ခါ ကိုရဲရင့်သစ္စာပြောတဲ့ settlement တွေဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ ထင်ရှားသွားပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ယခင်ကအခြေချနေထိုင်မှု လုံးဝမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်မငြင်းခဲ့သလို အဲဒီအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ ကိုလိုနီခေတ်မှာ အလုံးအရင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာ မြေဒူးမူဆလင်သမိုင်းက သက်သေပြနေပါတယ်။
ကိုရဲရင့်သစ္စာရဲ့ ပြန်ကြားချက်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုကို Logical evidence အနေနဲ့ ခုလိုပြောထားတာ တွေ့ပါတယ်။
“လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေက လက်နက်မဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို အဲဒီလို သာမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရခိုင်လူမျိုးတွေ မျိုးတုန်းသွားနိုင်ကြောင်း။”
ဒီနေရာမှာ ကိုရဲရင့်သစ္စာ မျက်စိအနည်းငယ် လျှမ်းသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက“ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်” ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ ကြိုးစားခဲ့တယ် ပါ။သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ် မဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော်ကွာခြားပါတယ်။ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့အခါ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တာတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ရွာမှာရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းကန်၊ စေတီပုထိုးတွေနဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေဟာ ဖျက်ဆီးခံရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ရခိုင်တွေက လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဘင်္ဂလီတွေက ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းအဖြစ် ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှ သတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ သံဗုဒ္ဓေကို ရွတ်ဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလီတွေကတော့ ဖမ်းမိလာတဲ့ ရခိုင်တွေကို လည်လှီးသတ်ဖြတ်မယ့်အချိန်မှာ ဘုရားစာတွေကို ရွတ်ဆိုကြတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေ သတ်မှတ်လို့ရပေမယ့် အဓိကရုဏ်းနောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ရခိုင်တွေဟာ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ စီးနင်းသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ကစဉ့်ကလျား ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီး အဲဒေသက ရခိုင်ရွာတွေဟာ ဘင်္ဂလီရွာတွေဖြစ်လာတာကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုလိုနီခေတ် ၁၉၂၁ခုနှစ်ကနေ မဆလခေတ် ၁၉၈၆ခုနှစ်အတွင်း မောင်တောမြို့နယ်တွင်းက ဘင်္ဂလီနဲ့ ရခိုင် လူဦးရေ စစ်တမ်းကို ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။
Table of population in Maungdaw
Year | Rakhaing | Bengali | Total | Remark
1921 | 34,700 | 68,035 | 65,724 |
1931 | 41,484 | 104,408 | 136,087 | Burma gazetteer
1956 | 5,808 | 124,452 | 165,936 |
1973 | 11,908 | 187,792 | 198,600 | (Akyab District of ACB)
1976 | 13,376 | 211,394 | 223,302 |
1981 | 13,326 | 212,070 | 222,549 |
1986 | 19,139 | 249,571 | 263,899 |
Total |264,507 | 283,649
၁၉၄၂ ကုလား-ရခိုင် အဓိကရုဏ်းနဲ့ ၁၉၄၉ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မူဂျာဟစ်ဆူပူအုံကြွမှုကြောင့် မောင်တောမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေ သတ်ဖြတ်ခံရပြီး ကစဉ့်ကလျား ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ ဟုတ်မဟုတ်ကို ၁၉၅၆ခုနှစ်စစ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဘင်္ဂလီဦးရေ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော်နဲ့ ရခိုင်ဦးရေ ငါးထောင်ကျော်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ကိုရဲရင့်သစ္စာ ကောက်ချက်ဆွဲသွားတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုရဲရင့်သစ္စာပြောသွားတာက-
“ကျွန်တော် မီးမောင်းထိုးပြ ချင်တဲ့နောက် တစ်ချက်ကတော့….တစ်ကယ်လို့သာ ဘင်္ဂါလီတွေ က ရခိုင်လူမျိုးတွေ ကို ဘာသာရေးခေါင်းစဉ် တပ်ပြီး သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခြင်း ပြုခဲ့မယ် ဆိုရင် ရခိုင်တွေ အနေနဲ့လည်း လက်တုန့်ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းကိုရန်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကမန်တွေကြား communal riot မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ဆိုထားသလိုကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို လက်ခံပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီတွေ ဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မျိုးတုန်းအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလုံးဝ မဟုတ်ကြောင်းပိုပြီး ထင်ရှားသွားပါတော့တယ်။”
ကျွန်တော်အထက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ရခိုင်တွေက လူမျိုးရေးပြဿနာလို့ ခံယူပြီး ဘင်္ဂလီတွေက ဘာသာရေးပြဿနာလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လူမျိုးရေးပြဿနာလို့ မြင်ထားတယ် ဆိုကတည်းက ရခိုင်တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းကို မုန်းတီးနာကျည်း သတ်ဖြတ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီစကားကို ထပ်ရှင်းပါမယ်။ ကမန်အများစုဟာ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ရုပ်ရည်အနည်းငယ် ကွဲပြားပါတယ်။ ရခိုင်တွေလိုပဲ ကမန်တွေဟာ ဘင်္ဂလီနဲ့ ရောရောနှောနှော မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး လူနည်းစုဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့နေတဲ့ဒေသမှာ သူတို့ဟာ ဘာလူမျိုးဆိုတာကို အနီးအနားက ရခိုင်တိုင်း သိကြသလို သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ စရိုက်ကိုလည်း ရခိုင်တွေ ကောင်းကောင်း သိထားပါတယ်။ တစ်ခါမှပြဿနာမရှိဖူးတဲ့ ဒီလူမျိုးကို အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီး ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ တန်းတူ ရခိုင်တွေ ဘယ်တုန်းကမှ သဘောမထားခဲ့ပါဘူး။ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ စရိုက်က ကမန်တွေနဲ့မတူပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို Islamist State ဖြစ်အောင် ဖန်တီးဖို့ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ဒေသခံရခိုင်တွေနဲ့ မကျေမလည်ဖြစ်ရာကနေ ဒီရခိုင်တွေမရှိမှသာ ဒီဒေသကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သူတို့ရဲ့လူအင်အားကို အသုံးပြုပြီး ရခိုင်တွေကို တိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းသုတေသနဌာန မော်ကွန်းဌာနစုမှာသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ လက်လှမ်းမှီရင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ခွဲထွက်ရေးအတွက် လူသိရှင်ကြား ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အချက်တွေကကတော့ မိုရှေရေဂါရ်အပါအ၀င် သမိုင်းသုတေသီ တော်တော်များများရဲ့ စာအုပ်တွေမှာ ဖော်ပြပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် လုပ်ရပ်တွေကို သမိုင်းသုတေသီ မိုရှေရေဂါရ်ရဲ့ Between Integration and Secession;The Muslim communities of Southen Philippines,Southen Thailand and Western Burma/Myanmar စာအုပ် အခန်း၅ Mojahideen Rebellion မှာ-
Muslim Religious leaders began preaching “Jihad” against Arakan “Infidels”. Indeed,initially,guerilla activities were directed more at “ethnic” targets(against the Buddhist Arakanese)than against the Government. လို့အတိအလင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီအချက်အလက်တွေကို ရှာမတွေ့ခင် ကြားဖူးနားဝရှိတာလေးနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုရဲရင့်သစ္စာကို မေးမြန်းတုန်းက ရခိုင်က ဘင်္ဂလီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့နောက်လိုက်တွေကို ကိုရမ်ရ်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ သွန်သင်ဆုံးမနေသလဲလို့ မေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ သူပုန်ထမှု၊ သာမန်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုအဖြစ် ရခိုင်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကိုရဲရင့်သစ္စာ ဥပမာပေးသွားတာ တွေ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအုံကြွမှုဟာ ရခိုင်တွေရဲ့ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှုကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ပြောသွားတာ တွေ့ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပဲ့ပါသွားမှာကို မလိုလားဘူးလို့ ကိုရဲရင့်သစ္စာရဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကို ဖော်ပြသွားတာကို ကျွန်တော်လေးစားစွာ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒီမူဂျာဟစ်ဆူပူအုံကြွမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရဲရင့်သစ္စာရဲ့ အမြင်ကို ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။ ရခိုင်တွေဟာ ဒီပြဿနာတွေကို ဘာသာရေးပြဿနာအဖြစ် မမြင်ပဲ လူမျိုးရေးပြဿနာအဖြစ် ရှုမြင်ထားကြောင်း အထက်မှာ ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် ရခိုင်တွေရဲ့တော်လှန်ရေးဟာ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ နေရာတော်တော်များများ ကွာခြားပါတယ်။ ရခိုင်တွေရဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကို တော်လှန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသမှာ အခြေချနေထိုင်နေကြတဲ့ ဗမာတွေကို သုတ်သင်ဖို့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အသေးစိတ်အချက်တွေ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောချင်လို့ ဥပမာလေးတစ်ခုပေးပါရစေ။ မိသားစုတစ်ခုမှာ မိဘမကောင်းလို့ သားသမီးက ကလန်ကဆန်လုပ်တာနဲ့ လာရောက်မှီခိုကပ်ရပ်နေတဲ့ အလုပ်သမား(သို့)မှီခိုသူက ကလန်ကဆန်လုပ်တာ ပုံစံချင်းမတူပါဘူး။ သွေးသားချင်းဖြစ်တဲ့ ပြဿနာနဲ့ တစိမ်းတရံစာနဲ့ ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ အတော့်ကို ကွာခြားပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော်ဟာခွဲထွက်ရေးသမားတွေကို ထောက်ခံနေတဲ့လူလို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံရေး၊တော်လှန်ရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အပြင်ဖက်က ပြည်ထောင်စုနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးကို တန်းတူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သာမန်ပြည်သူ တစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေက Religion of Peace လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး မလျော်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက် တချိန်က လူမျိုးရေးပြဿနာ သက်သက်ရှုမြင်ခဲ့ကြတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေတင်မကပဲ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မုန်းတီးမှုအမြစ်တွယ်လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်ရဲ့ ပြန်ကြားချက်-၁မှာ အကြမ်းဖျဉ်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ကိုရဲရင့်သစ္စာထောက်ပြသွားတဲ့ ခုဖြစ်နေတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘာသာရေးကို မိုက်ရိုင်းစွာဆဲဆိုမှုတွေ၊ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာလိုမျိုး အမုန်းတရားတွေ ပြည့်နှက်တဲ့စာအုပ်တွေဟာ တချိန်က လူမျိုးရေးပြဿနာအဖြစ် ရှုမြင်ရာကနေ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်မှု အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အကျိုးဆက်တွေပါပဲ။ ဒီစာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ရခိုင်ကဘင်္ဂလီတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နှစ်ခါတိတိ ကြုံတွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအကျိုးဆက်တွေဟာ ကိုရဲရင့်သစ္စာတို့လို တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိပြီး တရားအဆုံးအမကို မှန်ကန်စွာ လိုက်နာစောင့်ထိန်းနေတဲ့ မြန်မာမူလဆင်တွေကို တိုက်ရိုက်လာထိခိုက်စေပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြသွားတဲ့ အကိုးအကားဖြေရှင်းချက်တွေဟာ ပထမဆုံးပြန်ကြားချက်ထဲက ကျွန်တော့်ရဲ့ အကိုးအကားမပါတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ကိုရဲရင့်သစ္စာက ပါးစပ်ရာဇ၀င်အဖြစ် သုံးသပ်သွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီသလောက် ရှာကြံတင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
ဆီးရီးယားတပ်မတော်သည် Aleppo မြို့ရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ရှင်းလင်းခဲ့သည်ဆိုခြင်း
Posted by drmyochit Thursday, August 02, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဆီးရီးယား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များသည် ပြည်ပမှ အထောက်အပံ့ ပေးထားသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ရှိရာ Aleppo မြို့ အနောက် မြောက်ပိုင်းရှိ Salahuddin နှင့် Hamdaniya ခရိုင်များအား ရှင်းလင်း ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။ ယခု အချိန်တွင် Aleppo မြို့၏ နေရာ အများစုမှာ ၄င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆီးရီးယား တပ်မတော်က ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအပြင် Babal-Hadid ခရိုင်နှင့် Sokari ခရိုင် တောင်ပိုင်း တို့တွင်လည်း တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ် ကလည်း Aleppo မြို့ရှိ ဆီးရီးယား တပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့် လက်နက်ကိုင် သူပုန်များ အကြား ပဋိ ပက္ခများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါသည်။
ဆီးရီးယား တပ်မတော်သည် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအား ရှင်းလင်းရန် Aleppo မြို့ အနောက်တောင် ဘက်ရှိ ဆင်ခြေဖုံး များတွင် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ စ၍ ကြီးမားသော စစ်ဆင်ရေး တစ်ရပ် စတင် ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ ကလည်း အိမ်နီးချင်း တူရကီ နိုင်ငံမှ ဆီရီးယား နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်း နေသော အကြမ်းဖက် သမားများ စွာအား ဆီးရီးယား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် များက သုတ်သင် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ အတွင်းက စတင်ခဲ့သော ဆီးရီးယား နိုင်ငံအတွင်း ဆူပူ အုံကြွ မှုများတွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြား အပါအဝင် ပြည်သူများစွာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ဆီးရီးယား အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့များသည် အစိုးရအား တိုက်ခိုက်ရန် Aleppo မြို့တွင် စုရုံးနေကြ ကြောင်း၊ ၄င်းတို့သည် လုံးဝ ရှုံးနိမ့်မည်ဟု မိမိ အနေဖြင့် ယုံကြည် ထားကြောင်း ဆီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Walid al-Muallem က ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ တီဟီရန်၌ အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Ali Akbar Salehi နှင့် ပြုလုပ်သော ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခုတွင် Muallem က အထက်ပါ မှတ်ချက်အား ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသည် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေသော Assam ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်း
အိန္ဒိယ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး P.Chidambaram သည် ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက်နေ့ အစောပိုင်းတွင် Gopinath Bordoloi လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဓိက ရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်း Assam ပြည်နယ် Kokrajhar ခရိုင်သို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာ ခဲ့ပါသည်။ Assam ပြည်နယ်၌ ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်နေ့မှ စ၍ အကြမ်းဖက် မှုများဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး လူ ၄၈ ဦးသေဆုံးကာ ၅ဝဝ,ဝဝဝ ကျော် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါသည်။ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် မန်မို ဟန်ဆင်းသည် Assam ပြည်နယ်သို့ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းများရှိ ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် မန်မို ဟန်ဆင်းသည် Assam ပြည်နယ်ရှိ အကြမ်းဖက် မှုများ ဖြစ်ပွားနေသော Bodo ဒေသ စီမံ အုပ်ချုပ်ရေး (Bodoland Territorial Administered Districts-BTAD) ခရိုင်များ သို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ ပါသည်။ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် မန်မို ဟန်ဆင်းသည် Assam ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ၄င်း၏ အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး BTAD ၌ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော အခြေ အနေများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်း ဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အဆိုပါ ဒေသ၌ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ချထားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လေကြောင်းချီ တပ်ဖွဲ့များနှင့် အိန္ဒိယ ကြည်းတပ်အာုးKokrajhar ? Dhubri နှင့် Chirang ခရိုင်တို့၌ တပ်ဖြန့် ချထားခဲ့ ပါသည်။ မွတ်စလင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးအား Bodo လူငယ်များမှ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် Bodo မျိုးနွယ်စု များနှင့် မွတ်စလင် ဘာသာဝင်များ အကြား ပဋိ ပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့် ချထားခဲ့ သော်လည်း ပဋိ ပက္ခများသည် ရက်ပေါင်း ၇ ရက်ကြာ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆီးရီးယားတွင်ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် အီတာလျံ ၂ ဦးပြန်လွှတ်ခြင်း
ဆီးရီးယား နိုင်ငံအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုပ်ငန်းတွင် တစ်ဆင့်ခံ ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေသည့် အီတာလျံ လျှပ်စစ် ကုမ္ပဏီမှ အင်ဂျင်နီယာ ၂ ဦးသည် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့က လေဆိပ်သွား လမ်းပေါ်တွင် ကားတစ်စီးဖြင့် သွားလာနေစဉ် မျက်နှာဖုံးစွပ် လူတစ်စုမှ ပြန်ပေးဆွဲ ခဲ့သည်။ ၄င်းအင်ဂျင် နီယာ ၂ ဦးအား ၈ ရက်ကြာ ဖမ်းဆီးထားပြီး ဆီးရီးယား တပ်မတော်၏ အကူ အညီဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ ခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီး သူများမှာ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ဟု မသိရကြောင်း၊ ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်းနှင့် ဆီးရီးယား အာဏာပိုင်များ၏ စီစဉ်ပေးမှုကြောင့် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အီတလီ နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ ပါသည်။
Aleppo မြို့တွင် ဗြိတိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် အယောင်ဆောင်လျက်ရှိခြင်း
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ Aleppo မြို့တွင် ဗြိတိန် အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် သတင်းသမား အသွင်ယူ၍ ဗြိတိန် သူလျှို အဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိကြောင်း ဆီးရီးယား သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆီးရီးယား လက်နက်ကိုင် သူပုန်များ အကြားတွင် မေရီအဖြစ် လူသိများသည့် ဗြိတိသျှ သူလျှို အမျိုးသမီး မှာ ဆီးရီးယား အနောက် မြောက်ဘက်ရှိ Idlib မြို့တွင် သူလျှို လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ Aleppo မြို့တွင် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း၊ ၄င်းဗြိတိသျှ သူလျှိုမှာ လစ်ဗျား နိုင်ငံရှိ သူပုန်ခေါင်းဆောင် Mahdi Al Harati နှင့် အတူ တွဲလျက်ရှိပြီး ၄င်းလစ်ဗျား သူပုန် ခေါင်းဆောင်မှ ဆီးရီးယားရှိ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်သူများ ထံသို့ ၄င်း၏ တပ်သား ၃ဝ အား ပေးပို့ကူညီစေ ခဲ့ကြောင်း ၄င်း မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ အစောပိုင်းက ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်းက ၄င်း၏ ကွန်ဆာ ဗေးတစ် ပါတီအား ''လစ်ဗျား ကိုတော့ ဝင်နှောင့်ပြီးပြီ အခု ဘယ်နိုင်ငံကို လုပ်သင့်သလဲ'' ဟုပြောကြား ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ ဗြိတိန် လေတပ် အထူး တပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် ဆီးရီးယား လက်နက်ကိုင် သူပုန်များကို လေ့ကျင့်ပေး ခဲ့ကြောင်း ဗြိတိန် မီဒီယာ များမှ ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့ပြီးနောက် ၁ဝ ရက်ခန့် အကြာတွင် ၄င်းသတင်းများ ထွက်ပေါ် လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်နေ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တွင် ဗြိတိသျှ လေတပ် အထူးတပ်ဖွဲ့ ဝင်များသည် ဆီးရီးယား လက်နက်ကိုင် သူပုန် ခေါင်းဆောင်များကို လေ့ကျင့်ပေး ခဲ့ကြောင်း ဆီးရီးယား၏ Bashar Al-Assad အစိုးရအား ၄ ပတ်အတွင်း ဖြုတ်ချသွား မည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၄င်းရက်တွင်ပင် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝီလီယံဟိတ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆီးရီးယား သူပုန်များအား ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ပြင်ပမှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မနက်ဖြန်သည် ၁၃၇၄ ခုနှစ် ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ဖြစ် သည်။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား အလောင်း တော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား သည် ကပိလဝတ်ပြည့်ရှင် သုဒ္ဓေါဓနမင်းကြီး၏ မိဖုရားသီရိမဟာမာယာဒေဝီ၏ ဝမ်းကြာတိုက်၌ ဝါဆိုလပြည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် သန္ဓေယူတော်မူခဲ့သည်။ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေနှင့် ရဟန်းတို့ကိုမြင်ရသော် ဘဝသံသရာကို တရား သံဝေဂရရာမှ သက်တော် ၂၉ နှစ် အရွယ် မဟာ သက္ကရာဇ် ၉၇ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် တနင်္လာနေ့တွင် တောထွက်တော်မူခဲ့သည်။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁ဝ၃ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် စနေနေ့တွင် မိဂဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးနေသော ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးတို့အား ဓမ္မစကြာတရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကို သန္ဓေ၊ တောထွက်၊ ဓမ္မစက်ဟူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တို့ အမှတ်အသားပြုကြသည်။ ရဟန်းသံဃာ အရှင်သူမြတ်များသည် ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့မှသီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အထိ ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး မိမိတို့သီတင်းသုံးရာကျောင်း၌ပင် သီတင်းသုံးကြရသည်။ ရပ်ဝေးခရီးသို့ မြ<ွကကြရန် ပညတ်ထားသည်။ ရဟန်းသံဃာများ ဝါကပ်ခြင်းတွင် ဝါထပ်သောနှစ်များ၌ ပထမဝါဆို လပြည့်ကျော် (၁)ရက်မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အထိကို ပုရိမဝါကပ်သည်ဟု ခေါ်ကြသည်။
ဒုတိယ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အထိကို ပစ္ဆိမဝါကပ်သည်ဟု ခေါ်ကြသည်။
မြန်မာတို့သည် ဝါဆိုလတွင် အစဉ်အလာအားဖြင့် ပဉ္ဇင်းခံပွဲနှင့် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲများ ကျင်းပကြ သည်မှာ ရှေးခေတ်ကပင်ဖြစ်သည်။ ပုဂံမြို့ရှိ သင်လျင်အိုကပ်သင်ကျောက်စာ၌ ”သားပဉ္ဇင်းခံ၍ တရားဦးနာသရော၊ ကျွန်၊နွား၊ ဥစ္စာပေး၏” ဟု ရေးထိုးထားရာ ပုဂံခေတ်ကပင် ပဉ္ဇင်းခံပွဲများရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ အင်ရုံရွာစား ဝန်ကြီးသီရိ ဥဇနာစီရင်ရေးသားသော လောကဗျူဟာကျမ်း၌ ဝါဆိုလဆန်း (၅)ရက်တွင် ဝါဝင်အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ” ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ ယခုဝါဆိုလရောက်ပေပြီ။ ပဉ္စသီ၊ အဋ္ဌသီ၊ ဒဿသီတို့ကို ဆောက်တည်၍ အလှူပေးခြင်း၊ သီလသီတင်း ဆောက်တည်ခြင်း၊ ဘာဝနာစီးဖြန်းခြင်းကိုလည်း သဒ္ဓါစေတနာစိတ်ရှိသမျှ လှူဒါန်းဆောက်တည်ကုန်” ဟူသော အမိန့်ပြန်တမ်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အစဉ်အလာဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဝါတွင်းကာလ၌ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ တရားစခန်းဝင်၍ တရား အားထုတ်ခြင်း၊ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား ဆွမ်းအစရှိသော ခဲဖွယ်များကပ်လှူခြင်း၊ ဝါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း စသည်ဖြင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဝါတွင်းသုံးလသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အဖို့ ဒါနကုသိုလ် အထူးပြုကြသော ကာလ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အများပြည်သူအပေါင်းတို့သည် အလှူရေစက်လက်နှင့်မကွာပြု၍ ကုသိုလ် ယူကြပါရန် နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။ ။
▼ Aug 02 (24)
ထုတ်ဝေခွင့် ယာ ယီ ရပ် ဆိုင်း ခဲ့သော လျှပ် တစ်ပြက် ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများတွင် အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ...
ဒုတိယသမ္မတ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဥာဏ်ထွန်းအား အမည်စာရ...
ကျန်းမာရေးအခြေနေ စိုးရိမ်ရသဖြင့် ဒေါ်စု လွှတ်တော် ခွ...
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ထေ...
အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး သူတိုင်း စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစ...
"တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သား ဖမ်းဆီးရေး စတင် မဲဆောက်၌ ၆...
ဝါဆိုလပြည့်နေ့တွင် ဘုရားဖူး၊ သိလစောင့် အနားယူသူ မျ...
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူး...
ဧရာဝတီ၏ ပရိသတ်တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်ခြင်း (သို့) လိမ်လည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ ခရီးစဉ် တွင် သားကြီးအရင်း...
OIC ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ ဆွေ...
ဘာသာခြားတွေကို တော့ ရစရာ မရှိအောင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ...
မွတ်ဆလင်များ ဗလီတွေ ထောင်နဲ့ချီဆောက်ပြီး အစ္စလမ်မစ်...
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အဖွဲ့ထောင်ထားသော မြေမြ...
ဆီးရီးယားတပ်မတော်သည် Aleppo မြို့ရှိလက်နက်ကိုင်အဖ...
အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသည် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေသော ...
ဆီးရီးယားတွင်ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် အီတာလျံ ၂ ဦးပြန်လွှ...
Aleppo မြို့တွင် ဗြိတိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်နိုင်င...